Santech njem Lnagshan ugwu - Changsha Santech Materials Co., Ltd.
Low agbaze Point alloys
HOME /OZI /Industory News
Santech njem Lnagshan ugwu
Oge: 2018-03-21 Hits:
Ikpeazụ ná ngwụcha izu anyị gara Lanshan Mountain, nke bụ otu n'ime China \_ 's National Geological Park na ama n'ihi na ya pụrụ iche Danxia landform. Ọ na-emi odude ke Xinning asị,banyere 500 Kilomita n'ebe Changsha, isi obodo nke Hunan ógbè. N'ebe ndịda Langshan Mountain jikọọ na Guilin, na n'ebe ugwu na ọ kwupụtaghachiri Zhangjiajie.
Ịgbago ugwu bụ omenala ọrụ nke anyị ụlọ ọrụ onye ọ bụla n'afọ, nke bụ ihe nnọchianya nke oké ulo oru na-agaziri afọ.
Ndị kasị adọrọ mmasị ntụpọ bụ Tianyi Lane, na-akpọ Sky Line, ya anya ka onye na akara na elu-igwe, ọ bụ 238.8 mita n'ogologo, widest nke uzo bụ 0.8 mita na kasị warara nke uzo bụ 0.33 mita. Mgbe na-eje ije n'okporo uzo ị ga-amakwa jijiji n'ihi n'ebe nile bụ ọchịchịrị, e nwere nanị a ìhè si n'eluigwe na nkume mgbidi, na yi ray Gburugburu ebe nwere ike hụrụ n'elu. Anyị na-tụrụ agwa \_ 's masterpiece.
Ọ bụ ezie na ihu igwe bụ urukpuru na kefoogu ụbọchị ndị a, Langshan emeghị-ewute anyị. The elu ị ịrị hazier n'anya bụ, ya \_ 's ike ịma dum mma, na ọ na obi dị ka anyị na-aga n'ime a fairyland, anyị ụtọ nke ọhụrụ ikuku na ihe omimi anya na ugwu.
LAGHACHI:The Magic Germanium
OSOTE Spring Festival Holiday
Biko chere free ka kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọkọnọ ma ọ bụ ndị ọzọ imekọ ihe ọnụ
Copyright © Changsha Santech Materials Co., Ltd.All Edebere ikikere